Lalao sy fampiharana 3 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Lalao sy fampiharana 3 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra
Tonga amin'ny Alakamisy isika ary manomboka manelingelina ny tenantsika ao an-trano, any an-dakilasy, any am-piasana ... Akaiky ny faran'ny herinandro, ary hita izany. Ny fanisana hatramin'ny telo dia efa nanomboka (tsara, nanomboka tamin'ny Alatsinainy raha vao manokatra ny masontsika nony maraina), ary nanomboka teo Vaovao IPhone Mbola tapa-kevitra ny hanao mora kokoa ny fiandrasana izahay ary izany no antony itondranay andiany vaovao anao lalao sy fampiharana maimaimpoana na maimaim-poana azonao izao ary izao ihany.
Tadidio fa, ankoatry ny faningana izay hatoronay, ireto tolotra manaraka ireto dia manan-kery mandritra ny fotoana voafetra. Midika izany fa ny fahamarinan'izy ireo ihany no azontsika antoka amin'ny fotoana famoahana ity lahatsoratra ity, fa tsy aorian'izany, satria tsy fantatray hoe rahoviana izy ireo no mifarana. Noho izany, manoro hevitra anao izahay mba hampidina azy ireo haingana araka izay azo atao mba hahazoana tombony amin'ny fihenam-bidy. Ary raha tara ianao dia aza mijaly, hisy fotoana bebe kokoa sy tolotra vaovao.
2 Gitara Steel
Manomboka araka izay sahaza azy isika, miaraka amin'ny lalao tsara izay efa lazain'ny anarany aminao ny momba ny mekanika. «Simulator fananganana 2» dia a lalao fanamboarana tena izy izay ahafahanao mitondra fiara tena milina fananganana avy amin'ny marika toa ny Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL, ATLAS ary Kenworth. Raiso ny baiko, ny kamio, ny traktera, ny mixer vita amin'ny beton, ny milina asphalt sy ny maro hafa ary manamboara tranobe, lalana ...
«Manamboatra Simulator 2» manolotra anao milina maherin'ny 40 samy hafa ary asa fananganana 60 mahery. Raha liana amin'ity tontolo ity ianao, na te hanandrana azy fotsiny, dia mamporisika anao izahay hampidina azy io izao amin'ny iPhone na iPad anao.
Ny "Construction Simulator 2" dia misy vidiny mahazatra 4,99 € fa ankehitriny azonao atao izany amin'ny fihenam-bidy 40% amin'ny € 2,99 ihany ao amin'ny App Store.
Construction simulator 2€ 1,99
«Steel Guitar» dia fampiharana izay azonao atao mamorona ny hiranao manokana matihanina avy amin'ny iPhone na iPad. Ho an'ity dia manana fanangonana gitara marobe ianao (manomboka amin'ny herinaratra 6-string ka hatrany amin'ny acoustique, 12-string ary hatramin'ny pedal 8 sy 10), amplifier (anisan'izany ireo maodely lehibe indrindra nanomboka tamin'ny taona 60), 16 ny effets mahazatra ary mora- hampiasa mpampiasa interface-drag-and-drop.
"Steel Guitar" dia misy vidiny mahazatra € 1,09 fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana. tena malalaka ao amin'ny App Store.
Gitara Steel€ 0,99
Ary mifarana amin'ny lalao hafa isika, «Hashi Link Pro», lalao iray izay tsy maintsy ilainao mampifandray nosy amin'ny alàlan'ny fananganana tetezana amin'ny fomba iray izay ny isan'ny nosy dia mitovy amin'ny isan'ny tetezana mampifandray azy ireo. Mora? Eny, lalao tetikady ara-tsaina izany ka tsy azoko antoka.
"Hashi Link Pro" dia manana vidiny mahazatra € 3,49 fa ankehitriny azonao atao izany amin'ny a tena malalaka ao amin'ny App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Lalao sy fampiharana 3 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra
Ny famokarana faobe an'ny iPhone X dia mbola tsy natomboka
Ahoana ny fomba fihenam-bidy avy amin'ny iOS 11 mankany amin'ny iOS 10.3.3